Iimyuvesi ezili-14 kwiNkomfa ye-NCAA enkulu
Ezemidlalo ezinkulu kunye noPhando oluPhicayo Luchaza iYunivesithi kwi-Big Ten
Amalungu eNkomfa Eli-Big Ten angazibonga ngaphezu kwezemidlalo. Ezi zikolo zizonke zamalungu eMbutho weeYunivesithi zaseMerika, izikolo zihlukaniswe ngokugqwesa kwabo ekuphenyweni nasekufundiseni. Ngamnye unesahluko sePhi Beta Kappa . Zininzi zala manyuvesi zenza uludwe lweeyunivesithi zikarhulumente eziphezulu, izikolo zoshishino eziphezulu kunye nezikolo zobunjineli eziphezulu .
I-Big Ten yinxalenye yeCandelo leNqila yeBhola yeCandelo le-NCAA. Funda iifayili ezikhawulezayo malunga nezikolo eziPhumi ezilishumi , kwaye uhlole isatifiketi sabo se- SAT kunye ne- ACT chart .
Illinois (iYunivesithi yase-Illinois e-Urbana-Champaign)
IYunivesithi yase-Illinois Research Park / Wikimedia Commons
IYunivesithi yase-Illinois e-Urbana-Champaign ihamba ngokubanzi phakathi kweeyunivesithi eziphezulu zelizwe kweli lizwe. Iinkqubo zayo zenzululwazi kunye nezobunjineli zomelele ngakumbi, kwaye ilayibrari yayo ayidluli kuphela yi- Ivy League .
Indawo: Champaign, Illinois
Uhlobo lwesikolo: loluntu
Ubhaliso: 46,951 (33,932 izifundo zakudala)
Iqela: Ukulwa neCilini
Hlola i-Campus: Uhambo lwe-UIUC ifoto
Imilinganiselo ye-ACT kunye ne-SAT, izinga lokumkela, iindleko, uncedo lwezemali kunye nolunye ulwazi, tyelela iprofayile yaseYunivesithi yase-Illinois .
IYunivesithi yase-Indiana eBloomington
Inkqubo ye-flagus yase-Indiana yenkqubo yeyunivesithi yase-Indiana, iYunivesithi yase-Indiana eBloomington ine-parkus efana ne-2,000-acre efana nezakhiwo zayo ezivame ukuzakhiwa kwi-calestone yendawo.
Indawo: Bloomington, Indiana
Ubhaliso: 49,695 (39,184 izifundo zakudala)
Imilinganiselo ye-ACT kunye neSAT, izinga lokumkela, iindleko, uncedo lwezemali kunye nolunye ulwazi, tyelela iprofayili yase-Indiana University .
I-Iowa (iYunivithi yase-Iowa e-Iowa City)
Vkulikov / Wikimedia Commons
IYunivesithi yase-Iowa, njengezikolo ezininzi kuloluhlu, inamaphulo aphezulu ekufundiseni ukuphumelela amaqela ayo amnandi. Ubuhlengikazi, ukubhala okubhaliweyo kunye nobugcisa bonke abaphumeleleyo, ukubiza nje ezimbalwa.
Indawo: I- Iowa City, Iowa
Ubhaliso: 32,011 (ii-24,476 zezifundo zakudala)
Iqela: i- Hawkeyes
Imilinganiselo ye-ACT kunye ne-SAT, izinga lokumkela, iindleko, uncedo lwezemali kunye nolunye ulwazi, tyelela iprofayile yaseYunivesithi yase-Iowa .
Maryland (iYunivesithi yaseManchester kwiKholeji yaseKholeji)
G Fiume / Getty Izithombe
Enye yeyunivesithi yoluntu ephakamileyo kakhulu, iYunivesithi yaseManchester kwiKholeji yaseKholeji yi-campus e-flagus yase-Maryland kwinkqubo yeyunivesithi yaseburhulumenteni. I-College Park yi-Metro elula ehamba eWashington, DC, kunye neyunivesithi iye yazuza kwiintsebenziswano ezininzi zophando kunye norhulumente wephondo.
Indawo: College College, Maryland
Ubhaliso: 39,083 (28,472 izifundo eziphantsi)
Iqela: i- Terrapins
Ukwamkelwa kwezinga, iimvavanyo zokuvavanya, iindleko kunye nolunye ulwazi lubone iphrofayili yaseMaldin
UMichigan (iYunivesithi yaseMichigan eAnn Arbor)
I-Academically, iYunivesithi yaseMichigan yenye yezona ziko zikarhulumente ezinamandla kakhulu kwilizwe. Kwizikhundla zesizwe, iMichigan ihlala ihlala khona neBerkeley , iVirginia ne- UCLA . Kubafundi bangaphambili, izikolo zaseMichigan zikhulu kubini kunye nobunjineli.
Indawo: Ann Arbor, Michigan
Ubhaliso: 44,718 (28,983 abagqwesileyo)
Imilinganiselo ye-ACT kunye ne-SAT, izinga lokumkela, iindleko, uncedo lwezemali kunye nolunye ulwazi, tyelela iprofayile yaseYunivesithi yaseMichigan .
IYunivesithi yaseMichigan State e-East Lansing
Mark Cunningham / Getty Izithombe
UMbuso waseMichigan unomsebenzi omkhulu wee-5,200-ekre e-East Lansing, eMichigan. Ngaba abafundi abangaphezu kwama-50 000 kunye nezakhiwo eziku-700, uMichigan State yidolophu encinane. Kungenjalo, ukuba, banalo uphando olukhulu kunazo zonke kwilizwe elizweni.
Indawo: East Lansing, Michigan
Ubhaliso: 50,340 (39,090 abafundiswe phantsi)
Iqela: i- Spartans
Imilinganiselo ye-ACT kunye ne-SAT, izinga lokumkela, iindleko, uncedo lwezemali kunye nolunye ulwazi, tyelela inkcazo yase State Michigan .
Minnesota (iYunivesithi yaseMinnesota eMinapolis naseSaint Paul)
URaymond Boyd / Getty Izithombe
Ngabafundi abangaphezulu kwama-51 000, iYunivithi yaseMinnesota iyona-yunivesithi enkulu kwilizwe. Iiprogram zemfundo ezinamandla zibandakanya uqoqosho, i-sayensi kunye nobunjineli.
Indawo: iMinneapolis, eMinnesota
Iqela: iGood Gophers
Imilinganiselo ye-ACT kunye neSAT, izinga lokumkela, iindleko, uncedo lwezemali kunye nolunye ulwazi, tyelela iprofayile yaseYunivesithi yaseMinnesota .
I-Nebraska (iYunivesithi yaseNebraska eLincoln)
Joe Robbins / Getty Izithombe
IYunivesithi yaseNebraska eLincoln ihlala iphakathi kweeyunivesithi zikarhulumente eziphakamileyo ezingama-50 kweli lizwe. Iyunivesiti inezixhobo eziphandle zophando kunye namandla kwiinkalo ezivela kwishishini ukuya kwisiNgesi. Isixeko saseLincoln sinokuqhayisa ngomgangatho ophezulu wokuphila kunye nomzila omkhulu kunye nepaki.
Indawo: Lincoln, Nebraska
Uhlobo lwesikolo: Uluntu
Ubhaliso: 25,897 (20,833 abafundiswe phantsi)
Iqela: i- Cornhuskers
Imilinganiselo ye-ACT and SAT, izinga lokumkela, iindleko, uncedo lwezemali kunye nolunye ulwazi, tyelela iprofayile yaseYunivesithi yaseNebraska .
KwiYunivesithi yaseNyakatho ntshona
IYunivesithi yaseNyakatho-ntshonalanga ikwahlula ukuba yileyunivesithi yangasese kwiNgqungquthela enkulu yeShumi, ngoko unokulindela itekiti yentengo ephezulu. Nangona kunjalo, abafundi abakulungele ukufumana uncedo lwezezimali banokulindela uncedo oluninzi lwegranti, kwaye ngaphambili kwiphondo, iyunivesiti inamandla amakhulu kwiinqununu, ukusuka kwisiNgesi ukuya kwiNjineli.
Indawo: Evanston, Illinois
Uhlobo lwesikolo: abucala
Ubhaliso: 21,823 (8,791 izifundo zakudala)
Iqela: i- Wildcats
Imilinganiselo ye-ACT kunye ne-SAT, izinga lokumkela, iindleko, uncedo lwezemali kunye nolunye ulwazi, tyelela iphrofayli yeNyuvesi yaseNyakatho - ntshona .
IYunivesithi yaseOhio State eColumbus
I-Ohio State inehlukileyo yokuba yenye yeyunivesithi ezinkulu kakhulu kweli lizwe, ngoko kuyafaneleka ukuba banemidlalo enokuhlala kwisi-102,000. I-Ohio State ihlala ihamba phakathi kweeyunivesithi eziphakamileyo ezingama-20 kweli lizwe, kwaye iinkqubo zalo zomthetho, ishishini kunye nesayensi yezopolitiko ziphawuleka ngokukodwa.
Ubhaliso: 59,482 (i-45,381 izifundo zakudala)
Hlola i-campus kunye ne- Ohio State University
Imilinganiselo ye-ACT kunye ne-SAT, izinga lokumkela, iindleko, uncedo lwezemali kunye nolunye ulwazi, tyelela iprofayili yase - Ohio State .
IYunivesithi yasePenn State kwiYunivesithi yasePark
Rob Carr / Getty Izithombe
I-Penn State yi-flagus campus yase-Pennsylvania kwinkqubo yeyunivesithi yaseburhulumenteni, kwaye yinto ephezulu kakhulu. Njengamanani amaninzi eenyuvesi kule dilesi, iPenn State ineenkqubo ezinamandla kwishishini kunye nobunjineli.
Indawo: iYunivesithi yasePennsylvania
Ubhaliso: 47,789 (41,359 abafundele iidanga)
Amaqela: Iingonyama zeNittany kunye neNdonyamakazi
Imilinganiselo ye-ACT kunye ne-SAT, izinga lokumkela, iindleko, uncedo lwezemali kunye nolunye ulwazi, tyelela iphrofayili ye - Penn State .
IYunivesithi yePurty eWest Lafayette
UMichael Hickey / Getty Izithombe
IYunivesithi yePurty eWest Lafayette yiyona nkampani enkulu ye-Purdue University System e-Indiana. Ngeenkqubo ezingaphezulu kwama-200 zezifundo zakudala, i-Purdue inikeza into malunga phantse wonke umntu. I-Chicago inamamayela angama-65 ukusuka.
Indawo: IWest Lafayette, e-Indiana
Ubhaliso: 41,513 (31,105 izifundo ezidlulileyo)
Iqela: i- Boilermakers
Imilinganiselo ye-ACT kunye ne-SAT, izinga lokumkela, iindleko, uncedo lwezemali kunye nolunye ulwazi, tyelela iProfayuni ye - Purdue University .
IYunivesithi yakwaRuthgers eNew Brunswick iyona nto inkulu kwiiNyuvesi zeSizwe ezintathu zaseNew Jersey. Iyunivesithi yenza kakuhle kwizinga lezizwe zikawonkewonke, kwaye abafundi bafundela ngokulula ukufikelela kwiNew York City naseFiladelphia.
Indawo: iNew Brunswick, eNew Jersey
Ubhaliso: ama- 50,146 (36,168 abadlulileyo)
Iqela: i- Scarlet Knights
I-GPA, iSAT kunye neMigangatho ye-ACT yokufumana u-Rutgers
Ukwamukela izinga, amanqaku okuvavanya, iindleko kunye nolunye ulwazi qaphela iphrofayli yaseYunivesithi yaseRutgers .
IWisconsin (iYunivesithi yaseWisconsin eMadison)
UMike McGinnis / Getty Images
IYunivesithi yaseWisconsin ihlala iphakathi kwiiyunivesithi eziphakamileyo ezilishumi kweli lizwe, kwaye ihlonishwa kakhulu ngenxa yemali kunye nomgangatho wophando oqhutyelwe kumaziko angama-100 angaphandi. Kodwa abafundi bayazi nendlela yokudlala. Izintlu zeeyunivesithi zizintlu zezikolo eziphezulu.
Indawo: Madison, Wisconsin
Ubhaliso: 42,582 (30,958 abagqwesileyo)
Iqela: i- Badgers
Imilinganiselo ye-ACT and SAT, izinga lokumkela, iindleko, uncedo lwezemali kunye nolunye ulwazi, tyelela iprofayile yaseYunivesithi yaseWisconsin .
Izikolo eziPhezulu zeZakhiwo zoLwakhiwo lweeNdalo kunye noKwakha
IsiHlomelo seSigqeba sesiThuthi
Indlela abafazi abaye bayingxenye yoMthetho wamaLungelo oLuntu
2014 Iqiniso leMoya kunye neParanormal Stories
Ukuqalisa I-Block Technique: Zibeke isikhundla sakho ukuze uphumelele
Iikholeji zaseWisconsin eziphezulu
I-Mary Baldwin College Admissions
UCrassus Wafa njani?
Edith Piaf: I-Sparrow encinane
Amagunya okuLawula iAnatomical kunye neeCandelo zeBhunga
Abantu abaPhezulu kwiMbali yaseMexico
Isampula seSatifikethi seAkhawunti zoBugcisa okanye iBusiness Crafts
Yiyiphi inxaxheba ekudleni?
Ukuhlolisisa iiNzuzo kunye noLondolozo lweeveki zeSikolo seSine